B.A.M - SHABAKADA HIIRAAN XOG
Author Archives: B.A.M
Diyaaradaha Qaadka ee ka degi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo u wareegay magaalada Jowhar
Hiiraan Xog, April 20, 2017:-Diyaaradaha Qaadka ka ee dalka Kenya ayaa manta ka wareegay magaalada Muqdisho, kaddib markii Ganacsatada Qaadka ay sheegeen in canshuuro dheeraad ah ay ku soo rogtay Wasaaradda Maaliyadda dowlada Soomaaliya. Afar diyaaradood oo Qaad sida ayaa subax walba ka degi jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoo Wasaaradda...
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya
Hiiraan Xog, April 20, 2017:-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu la kulmay Safiirka Dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Stephen Schwartz ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga labada Dowladood iyo Dowladda Mareyanka doorka ay ku leedahay u gurmashada...
Dowlada Mareykanka oo Iran ku eedeyay dagaalka ka socdo dalka Yemen
Hiiraan Xog, April 20, 2017:-Xoghayaha difaaca dowlada Mareykanka, Jimm Matti, ayaa sheegey in meel kasta oo khilaaf ka jiro ay Iran ku lug leedahay. Isaga oo ku sugan wadanka uu loolanku ka dhexeeyo Iran ee Sucuudi carabiya ayuu sheegey in ay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto dedaalka ay Iran ugu jirto carqaladeyta dalka Yemen. Hadalkan ayuu yiri saacado kadib marklii...
Dowlada Nigeria oo shaqada ka ceeyrisay madaxii sirdoonka dalka Nigeria
Hiiraan Xog, April 20, 2017:-Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa si ku meel gaar ah shaqada uga joojiyay madaxa ciidamada sirdoonka ka dib markii todobaadkii hore laga helay guri ku yaala magaalada Lagos lacag ka badan afartan milyan oo Dollar. Madaxweynaha Nigeria ayaa amarkan shaqo joojinta ah bixiyey kadib markii madaxa sirdoonka, Ayo Oke, uu sheegey in ay lacagtani qayb...
Dowlada Mareykanka oo 5 kun oo qof oo Soomaali ah masaafurineyso
Hiiraan Xog, April 19, 2017:-Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad 5 kun oo Soomaali ah laga masaafurin doono Maraykanka. Brendan Raedy, afhayeenka ICE, waaxda fulinta arr. socdaalka iyo kastamka ayaa VOA u sheegay laga soo bilaabo 1-dii bishan April, 2017 ilaa 4,801 oo Soomaali ah ay heleen amarkii u danbeeyay ee dalka looga soo saari lahaa. Afhayeenka ayaa...
Daawo Sawiro:- madaxweynaha dalk Ruwaanda oo si heersara ah logu soo dhaweyay dalka Jabuuti
Hiiraan Xog, April 18, 2017:-Madaxweynaha dalka Ruwaanda ayaa manta si diiran logu soo dhaweyay garoonka diyaaradaha ee dalka Jabuuti, waxaana soo dhaweynta Madaxweyne Kagame ka qebqaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweyne Kagame ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya Marwadiisa, waxaana inta uu joogo kulamo la qaadan doonaa dhiggiisa Jabuuti. Labada...
Hiiraan Xog, April 18, 2017:-Nabadoon caan ah oo lagu magacabi jiray Mustaf maxamed dhicisoow ka tirsanaa Ergadii soo xushay xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya ee lagu soo doortay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/Dhaxe ayaa caawo lagu dilay magaalada Baledweyne. Kooxo hubeysan ayaa goor dhaw ku toogtay Nabadoonka xafada Holwadag oo ka mid ah afarta xaafad ee magaalada...
Kulan looga hadlayay Abaaraha ka jiro dalka oo ka dhacay Madaxtooyada Vila Soomaaliya
Hiiraan Xog, April 18, 2017:-Madaxtooyada Soomaaliya gelinkii dambe ee maanta waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay Arrimaha Abaaraha ee ka jira dalka, taasi oo saameysay dadka iyo duunyada. Kulankan ayaa waxaa yeeshay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), Wasiirka Gar gaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maryan Qaasim iyo...
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo gudi u magacaabay wadahadalada Ahlusuna iyo Galmudug
Hiiraan Xog, Apriil 18, 2017:-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Guddi ay ka mid yihiin Wasiiro ka tirsan Xukuumadda dhaxe ee Soomaaliya waxaa uu u magacaabay wadahalada Galmudug iyo Ahlusunna. Wasiiradaasi waxaa ka mid ah Wasiirka Arimaha dibada Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo sidoo kale Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa. Ra’iisul...
Dowlada Mareykanka oo sheegtay in aay dhiseeyso ciidamada dowlada Soomaaliya
Hiiraan Xog, April 18, 2017:- Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay xoojinayso tababarada la siinaayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay uga hortagaan Weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada dowladda Mareykanka ee ku sugan Qaaradda Afrika ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan tababarayaal ka tirsan Ciidamada...